Anguilla no mandresy amin'ny nosy tsara indrindra any Karaiba, Bermuda, ary Bahamas
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Anguilla no mandresy amin'ny nosy tsara indrindra any Karaiba, Bermuda, ary Bahamas
Ny Anguilla Tourist Board (ATB) dia faly nanambara fa nandritra ny taona fahefatra nifanesy, Anguilla no laharana laharana 1 amin'ny lisitry ny World Awards + Travel amin'ny fialan-tsasatra 2020 an'ny Nosy Top any Karaiba, Bermuda ary Bahamas . Ny mpamaky dia nanome isa ireo nosy amin'ireto toetra manaraka ireto: Manintona / morontsiraka, hetsika / fitsangatsanganana, trano fisakafoanana / sakafo, olona / finamanana, lanja. Anguilla koa dia nitana ny laharana faha-7 amin'ireo nosy Top 25 eran'izao tontolo izao, ilay nosy Karaiba tokana nahavita ny lisitra.
"Tena reharehanay ny mandray ity loka ity mandritra ny efa-taona misesy - fanomezam-boninahitra ho an'ny mponin'i Anguilla sy ny vokatra miavaka atolotray anay", hoy ny nambaran'ny Hon. Haydn Hughes, Minisitry ny fizahantany any Anguilla. "Anguilla dia manolotra ity fitambarana mahafinaritra amin'ny morontsiraka tena mahavariana ity, ny nahandro mahafinaritra, ny trano fandraisam-bahiny mahavariana ary ny fitiavana mandray vahiny, izay mitazona ireo mpitsidika hiverina isan-taona," hoy hatrany izy.
Ho fankalazana ny tsingerintaona faha-25, Travel + Leisure dia hampiantrano ny “Toast + Post” amin'ny haino aman-jery sosialy izay hanomboka amin'ny 8 Jolay rehefa hafahana ny mpandresy hatramin'ny 31 Aogositra. Entanina ny mpamaky sy ny mpandresy erak'izao tontolo izao mba TOAST - manangana fitaratra faran'izay tsara amin'ny dia ary avy eo… POST - haka sary na horonan-tsary amin'izao fotoana izao ary handefa izany amin'ny media sosialy, amin'ny alàlan'ny tenifototra #TLToast sy #TLWorldsBest miaraka amin'ireo marika misy azy ireo. Entanina ireo mpankafy Anguilla handefa amin'ny sehatra sosialy ATB rehetra amin'ny alàlan'ny Hashtag #MyAnguilla.
Ny Alarobia 8 Jolay, amin'ny 5:00 PM EST, ny Hon. Haydn Hughes dia hiaraka amin'i Jacqueline Gifford, tonian-dahatsoratr'i Travel + Leisure's Editor amin'ny seho, amin'ny resadresaka ifanaovana amin'ny Instagram Live ao amin'ny @TravelandLeisure hanombohana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana, iray amin'ireo mpandresy dimy no nasaina hanao izany.
Isan-taona, nandritra izay 25 taona lasa izay, ny mpamaky ny Travel + Leisure - marika haino aman-jery mpitsangatsangana lehibe indrindra any Etazonia, miaraka amina mpihaino 6.7 tapitrisa - dia mizara ny eritreriny momba ny toerana itodiana, trano fandraisam-bahiny, hotely, spaoro, zotram-piaramanidina, sambo fitsangantsanganana, mpandraharaha mpizahatany, masoivoho fiara-manofa fiara, ary maro hafa amin'ny fanadihadiana isan-taona. Ny valiny feno sy ny tatitra momba ny loka dia azo jerena ao www.travelandleisure.com/worldsbest .
Raha mila fanazavana momba an'i Anguilla dia tsidiho ny tranokala ofisialin'ny Anguilla Tourist Board: www.IvisitAnguilla.com ; araho amin'ny Facebook: Facebook.com/AnguillaOfficial; Instagram:
Momba an'i Anguilla
Romance? Fahasoavana tsy mitapoka? Chic tsy mifangaro? Ary fahasambarana tsy voafehy? Anguilla dia mihoatra ny mahazatra.
Hafatra avy amin'ny fo avy amin'ny fitsidihana ny CEO an'ny California ao amin'ny COVID-19 Effects
Ny Amerikanina dia mety ho aingam-panahy avy amin'ny eritreritra eran-tany lavitra mampanjavona sosialy